Baarlamaanka iyo Xukuumadda oo isku raacay in aanay doorasho qof iyo cod dhici karin 2016 – STAR FM SOMALIA
Baarlamaanka iyo Xukuumadda oo isku raacay in aanay doorasho qof iyo cod dhici karin 2016
labada gole ee dowladda Baarlamaanka iyo Xukuumadda ayaa isku raacay in dalka aanay doorasho hal qof iyo hal cod ka dhici karin dalka, kadib kulan arrimaha Hiigsiga sanadka 2016 looga hadlayay oo uu Baarlamaanka ku yeeshay magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke iyo xubno ka tirsan Golihiisa Wasiirada ayaa ka soo qeyb galay kulanka, iyadoo laga akhriyay saddex qodob oo ay ku heshiiyeen Xukuumadda iyo Baarlamaanka.
Guddi hoosaad ka kooban 25 xubnood oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay shirar wada tashi oo ku saabsanaa Hiigsiga sanadka 2016 la lahaayeen Guddi Wasiiro ah oo ka socday Xukuumadda, iyagoo isla meel dhigay qodobo looga gudbayo marxalada hada taagan.
Guddoomiyaha Gudi hoosaadka Baarlamaanka ee u qaabilsan ka soo tala bixinta hiigsiga 2016 C/llaahi Goodax Barre ayaa kulanka ka hor akhriyay saddex qodob oo ay ku isku waafaqeen Xukuumadda iyo Baarlamaanka, kaasoo ka mid ahaa in sanadka 2016 aanay dalka ka dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod.
Saddexda Qodob labada gole ay isku waafaqeen ama ku heshiiyeen waxaa ka mid ahaa:-
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo kulanka ka hadlay ayaa uga mahad celiyay Baarlamaanka wada tashiyada ay maalmahan lahaayeen Golaha Wasiirada iyo xubnaha Baarlamanka, waxaana uu xusay in saddexdan qodob lagu jaan-goynayo xaalada dalka ay isla garteen.
Mr Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay inay muhiim tahay in golayaasha dowladda ay mar walba mideysnaadaan, gaar ahaan Golaha Fulinta iyp Baarlamaanka, taasoo uu xusay in wax walba la gari karo haddii ay midoobaan.
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in mar walba loo baahan yahay in maskaxda lagu haayo in Umadda loo adeego, waxaana uu xusay in aan loo dulqaadan doonin cidii carqalad wada ee dooneysa inay ka hortagto waxa ay dowladdu wado.
Ugu dambeyn waxaa qodobada ay isku raaceen Xukuumadda iyo Baarlamaanka la hor geynayaa maalinta berri shirka looga hadlayo arrimaha Hiigsiga sanadka 2016 ee ay ka qeyb galayaan dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo Beesha Caalamka
Maamulka Gobolada Dhexe oo amaro dul dhigtay Warbaahinta ka shaqeysa deegaanada ay ka arimiyaan
Madaxweynaha marekanka oo khudbad taariikhi ah ka jeediyay Xarunta Midowga Afrika ee Addis Ababa